म "पत्ता लगाउनुहोस्" को बाहिर प्राप्त गर्न सक्दैन: के? पूर्ण निर्देशन
"? - के" पत्ता लगाउनुहोस् "म को प्राप्त गर्न सक्छौं छैन": एकदम अब अक्सर तपाईं एउटा प्रश्न पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, यो विषय हाल एकदम लोकप्रिय बन्दैछ। के के बाहिर आंकडा यसलाई तपाईं प्रयास गरौं। साथै, यस व्यवहार को लागि कारण हुन सक्छ देखो।
के यदि तपाईं को विषय संग सामना गर्दै छन् पत्ता लगाउनुहोस् "म बाहिर प्राप्त गर्न सक्दैन" "- के", यो सामाजिक सञ्जाल मा प्राविधिक काम प्रक्रियामा छन् कि भनेर जाँच लायक छ। अक्सर, रोकथाम वा नवीकरण आतंक साधारण प्रयोगकर्ताहरूको एक कारण बन्न सक्छ।
तपाईं ध्यान दिएर समाचार पालना भने, पाठ्यक्रम, तपाईं यसलाई प्रशासक, वा बढी गम्भीर कुरा गरेको थियो ठ्याक्कै कसरी थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, हामी सम्म प्राविधिक काम अन्त बस कुर्न हुनेछ, र साइट एक परिचित र कष्ट-मुक्त सञ्चालन मा परिचालन हुनेछ। अर्को, सामाजिक सञ्जाल मा "निस्कनुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्, र सबै समस्या हल छन्। तर यदि यो काम गर्दैन, र तपाईं अझै पनि प्रश्न विचार: पत्ता लगाउनुहोस् "म बाहिर प्राप्त गर्न सक्दैन"? "- के", तपाईं अन्यत्र समस्या को कारण खोज्न छ।
तर पहिले, का एक सरल र सजिलो विषय हेरौँ। उदाहरणका लागि, सामाजिक सञ्जाल मा "स्कूलका साथीहरू" को बाहिर प्राप्त गर्न कसरी। सबै पछि, कहिलेकाहीं फरक समुदाय अब बस कुनै पनि आवश्यकता छ।
सुरु लागि सामाजिक सञ्जाल लग इन हुनेछ। त्यसपछि दायाँ, हामी यसको मुख्य पृष्ठमा समूह जानुहोस्। अब, अवतार अन्तर्गत लेखिएको "निकास" पत्ता लगाउन वा "छोड्नुहोस्" (शब्दहरू फरक हुन सक्छ)। एक मात्र लाइन मा क्लिक गर्न, र तपाईं उप्रान्त समुदाय को सदस्यहरु बीच हुनेछ छ। रूपमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, केही पनि गाह्रो।
अवस्थाहरू जहाँ यो लाइन मा क्लिक गर्न असम्भव छ पृष्ठ ताजा, र त्यसपछि फेरि प्रयास गर्नुहोस्। ढिलो होस् वा चाँडो सबै इच्छा। "- के?" पत्ता लगाउनुहोस् "म बाहिर प्राप्त गर्न सक्दैन": र अब यसलाई हाम्रो प्रश्न फिर्ता जानु पर्छ। वास्तवमा, त्यहाँ तपाईं समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न निश्चित हो कि केही राम्रो रोचक नजिकिंदै छन्।
त्यसैले अब तपाईँलाई सामाजिक सञ्जाल बाहिर प्राप्त गर्ने क्षमता गुमाउन एक थप रोचक र साधारण कारण हेरौं। एकदम अक्सर मानिसहरूले मलाई सोध्न कसरी आफ्नो गर्दा "Odnoklassniki" (सबै), को बाहिर प्राप्त गर्न सञ्चालन प्रणाली छन् भाइरस द्वारा संक्रमित।
खुलस्त, यो मामला मा, तपाईं मात्र राम्रो परीक्षण एन्टिभाइरस, साथै कम्प्युटर को पूर्ण उपचार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईं आदेश प्रणालीमा ल्याउन पछि, ब्राउजर र सामाजिक सञ्जाल पनि सामान्यतया सञ्चालन हुनेछ। तथापि, तपाईं हामी तपाईंलाई होस्ट फाइल निर्मल भन्ने तथ्यलाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो नियम, धेरै भाइरस बसोबास कहाँ छ। यो सिस्टम विभाजन मा विन्डोज फोल्डर मा स्थित छ। आदि गर्न चालक, र त्यसपछि - System32, आदि पछ्याउने त्यहाँबाट अब हामी एक नोटबुक खुला कागजात आवश्यक, यो लेखिएको छ कि सबै मेटाउन, र बचत गर्नुहोस्। तपाईं ब्राउजर पुनः र सामाजिक सञ्जाल बाट निस्कनुहोस् बारम्बार प्रयास गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, यो चरण मद्दत गर्छ। तर सधैं।
तपाईं अझै पनि अर्को questionsAbout सोचिरहेका छन् भने: - तपाईं त प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ भाइरस लागि आफ्नो कम्प्युटर स्क्यान, पत्ता लगाउनुहोस् "म बाहिर प्राप्त गर्न सक्दैन" "के?"। त्यसपछि सबै खराब फाइलहरू सफा। प्रक्रिया यस प्रकारको पछि, नियम, सबै आफ्नो सिट फर्के। तर मात्र हामीलाई बाधा गर्न सक्ने सबै विकल्प हो। गरेको सम्झौता प्रौद्योगिकी काम, र भाइरस परे हुन सक्छ के, हेरौं।
पत्ता लगाउनुहोस् "किन म बाहिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ" "म के गर्नुपर्छ?": एकदम अक्सर, प्रयोगकर्ताहरूले यो प्रश्न सोधियो। यो कम्प्युटर प्रणाली असफलता को मामला मा उत्पन्न हुन्छ। कि कारण गलत तरिकाले सफ्टवेयर, चालक, वा आपतकालीन बन्द स्थापित हुन सक्छ। सामान्य मा, धेरै कारण छन्, तर एक को परिणाम - ब्राउजर र कार्यक्रम नियन्त्रण बाहिर स्पिन गर्न थाल्छन्। प्रयोगकर्ता सुन्न छैन।
ठीक छ, ब्राउजर पुन तर बाँकी केही छ। त्यो छ, यसलाई हटाउन र त्यसपछि फेरि राखे। तर तपाईं पनि अर्को प्रविधी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईँले सजिलै रजिस्ट्री सफा गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो ब्राउजरमा भण्डारण गरिएका डाटा को छुटकारा। त्यसैले, सामाजिक सञ्जाल साइटहरू भ्रमण पछि, तपाईं यसलाई फेरि लग गर्न आवश्यक छ भनेर हुनेछ। कि सबै समस्या छ।
लागि रजिस्ट्री सफाई Ccleaner प्रयोग गर्न बेहतर छ। यो उपयोगिता चलाउन र बाँया मा त्यसपछि, स्क्यान सेटिङहरू सेट। टिकटिक ब्राउजर र प्रणाली डिस्क सबै खण्डहरू टिकटिक। को "विश्लेषण" र त्यसपछि "सफा" चलाउनुहोस्। सबै मामला हो। तर, प्रश्न उठ्न सक्छ कि अर्को कारण हो: पत्ता लगाउनुहोस् "म बाहिर प्राप्त गर्न सक्दैन" "- के?"।
पछिल्लो परिदृश्य - यो तथाकथित इन्टरनेट लत को उपस्थिति जस्तै केही छ। यस मामला मा, प्रयोगकर्ता ठेगाना subconsciously सामाजिक सञ्जाल मा संचार संग "संलग्न" गर्न चाहन्छ भने पनि, त्यसपछि, को पाठ्यक्रम, तिनी सफल छैन।
त्यहाँ धेरै बाहिर निकाल्छ छन्। पहिलो - यो केवल आफ्नो खाता ब्लक छ। तपाईं विशेष सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ - यो डाटा प्रोफाइल चुरा, त्यसपछि तपाईं सिस्टम लग इन गर्न सक्षम हुने छैन।
दोस्रो विकल्प - एक चिकित्सक मदत खोज्न। आफ्नो लत बारेमा उसलाई भन। डाक्टर सामाजिक सञ्जाल बारेमा भूल मद्दत गर्न सक्छ।
मानक विधि र अवस्थामा, भूल यदि मेल: कसरी "Instagramm" पुनर्स्थापना
कसरी समूह खल्ती मा "सम्पर्क" पैसा बनाउने?
SSID वाइफाइ पत्ता लगाउन कसरी विवरण
कसरी पाठ को रूप मा "हामीलाई सम्पर्क" मा एक लिंक फेंक: राज
उपनाम र आफ्नो सेटिङहरू लागि वर्ण
शब्द "हा": यो के मतलब र प्रयोग गर्दा
कसरी विदेशीहरू लागि रूसी भाषा सिकाउन? विदेशीहरू लागि सबै भन्दा राम्रो रूसी भाषा पाठयपुस्तक
कसरी स्तनपान देखि एक बच्चा wean गर्न?
छोराछोरीको कोठा लागि नरम तल्ला: सान्त्वना र सुरक्षा
यूजीन Charushin: जीवनी, लेखोटहरू, चित्र, फोटो
जो एक चयन गर्न9वर्ष को लागि केटी उपहार?
पत्र को प्रकार। आधिकारिक पत्र को प्रकार
पानी प्रतिरोधी पर्खाल प्यानल: स्थापना र अनुप्रयोग सुविधाहरू
टर्की को ईजियन तट को रिसोर्ट्स
संसारमा Fattest बच्चा: मिठाई वा भयानक?
एक बिजुली छुरा कसरी चयन गर्न: नोट के महत्त्वपूर्ण छ
खूबानी "ruddy": विविधता, खेती, रोपण र हेरविचार को विवरण
शीघ्र, सपना व्याख्या: सपनामा नृत्य - के गर्ने?